सुत्नेबेला एक पोटी लसुन चपाएर सुत्ने गर्नुस यस्ता गज्जबको फाईदा पाउनुहोस ! – Namaste Dainik
सुत्नेबेला एक पोटी लसुन चपाएर सुत्ने गर्नुस यस्ता गज्जबको फाईदा पाउनुहोस !
August 25, 2020 NamastedainikLeaveaComment on सुत्नेबेला एक पोटी लसुन चपाएर सुत्ने गर्नुस यस्ता गज्जबको फाईदा पाउनुहोस !
यसले तरकारी स्वादिलो बनाउने मात्र होइन,पेटसम्बन्धी विविध विकार र रोग पनि निको पार्दछ । लसुनको केस्रा अचारमा पनि मज्जाले प्रयोग गरिन्छ । यति मात्र होइन, लसुनको हरियो पात पनि त्यत्तिकै गुनिलो हुन्छ । पातको तरकारी र अचार दुवै बनाइन्छ । लसुनको स्वाद नेपाली मात्र नभएर संसार भरका मानिसहरूको जिभ्रोमा टक्क झुन्डिएको हुन्छ । स्वाद मीठो र गन्ध राम्रो मात्र होइन, यसका निकै धेरै गुनहरू छन् ।
लसुनका पातमा म्यांगानिज तत्व हुन्छ । यसले शरीरमा कोलेस्टेरोलको मात्रा नियन्त्रण गर्छ र मुटु तथा रगतसम्बन्धी समस्या कम गर्छ । लसुनको पातको नियमित सेवनले पेट तथा पाचन प्रणालीसम्बन्धी संक्रमण पनि कम गर्छ । साथै,चिसो तथा रुघाखोकीको उपचारमा पनि लसुनको पातको सेवन कामयावी हुन्छ । त्यसैले,लसुनको केस्रा मात्र होइन हरियो पातसमेत तरकारी बजारबाट किनेर नियमित तरकारी वा अचारमा मिलाएर खाने गर्नु अति उत्तम काम हो ।
कोरोना संक्रमणबाट नेपाली कांग्रेसका नेताको मृत्यु।